Hay?ada COSVO oo sii wadaysa howlaha Cisbitalka Marka xili Dowladda hubinayso xuquuqda shaqaalaha – Radio Daljir
Seteembar 5, 2013 5:09 b 0
Marka, September 5, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bulshada ku sugan Marka iyo ururrada caafimaadka deegaanka kala hadashay xaalada degmada Marka, iyo cisbitalka degmadaas oo aan muddo shaqayn.
Masuuliyiin ka tirsan wasaarada arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya oo booqday Cisbitalka ayaa la kulmay masuuliyiinta Hay?ada COSVO, taas oo gacanta ku haysay cisbitalka balse aan bilaahan wax shaqo ah qaban.
Dowladdu waxay sheegtay in qeyb ka noqonayso in la dhameeyo khilaaf ka jira Cisbitalka, waxay balan-qaaday in la dar dar geliyo howlaha shaqo ee Cisbitalka, masuuliyiinta dowladda ka socday sidoo kale waxay u balanqaadeen maamulka Cisbitaalka in ay hubin doonaan shaqaalaha xuquuqdoda.
Agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Abtidoon Xalane ayaa yiri ??Hay?ado caalami ah ayaan keenayna halkan, ?Kormeero ayaan samaynaynaa waxaana ka hortegi doonaa khilaafka, wixii xuquuq ah oo ka maqan shaqaalahana waan daba geleynaa.?
Waxaa gaabis noqday adeegyadii ay bixin jirtay hay?ada COSVO oo gacanta ku haysay degmada Marka, sidoo kale xaalada Cisbitalka ayaa inta badan ahayd mid cakiran, kadib markii la waayey mushaarkii shaqaalaha, taas oo iyana saameyn ku reebtay bulshada adeegyada soo doonan jiray.